DOWNLOAD LOGITECH G25 ỌKWỌ ỤGBỌALA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ndị ọkwọ ụgbọ ala maka Logitech G25 Racing Wheel
Inye nchekwa nchekwa ZIP na Linux
Ọzọ, anyị ga-emetụ aka na ụlọ ọrụ abụọ a na-ewu ewu na-achịkwa site na njikwa, ya bụ, onye ọrụ ga-abanye n'ime ụlọ na iwu ndị ọzọ iji jikwaa faịlụ na ngwaọrụ niile. Ihe atụ nke a bụ nkesa Ubuntu, na ndị nwe ụlọ ndị ọzọ na-ewu, anyị ga-eme ka ọ pụta ìhè ọ bụla.
N'ụzọ dị iche, m ga-achọ ịma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta mmemme nke usoro ihe ochie ahụ, buru ụzọ lelee ma ọ bụ na nchịkọta ụlọ ọrụ ma ọ bụ nchịkọta nke onye ọ bụla maka nkesa gị, n'ihi na ọ dị mfe karị ịme ihe dị otú ahụ.
Hụkwa: Ịwụnye nchịkọta RPM / nkwụnye ụgwọ na Ubuntu
Usoro 1: Unzip
Ọ bụ ezie na na Ubuntu Unzip ọ bụ ọrụ e wuru na-enye gị ohere ijikwa ebe nchekwa nke ụdị ị chọrọ, mana na Linux ndị ọzọ na-ewuli ngwá ọrụ a bara uru, yabụ ka anyị site n'ịwụnye ya, wee mesoo mmekọrịta ahụ.
Malite site na-agba ọsọ "Njedebe" ọ bụla usoro bara uru, dịka ọmụmaatụ, site na menu.
Ndepụta otu ebetinye awụnye unzipmaka nkesa na Ubuntu ma ọ bụ Debian, ma ọ bụsudo yum wụnye zipụ zipụmaka nsụgharị na-eji Red Hat usoro ngwugwu. Mgbe mmeghe, pịa Tinye.
Kọwaa paswọọdụ iji mee ka mgbọrọgwụ nweta, ebe ọ bụ na anyị na-eji iwu sudo, na-eme ihe niile dị na nnọchite nke superuser.
Ugbu a, ọ na-anọgide na-echere ruo mgbe agbakwunyere faịlụ niile na sistemụ. N'ihe banyere Unzip na kọmputa gị, ị ga-enweta ọkwa.
Ọzọ, ị ga-achọ ịma ebe ebe nchekwa ahụ chọrọ, ọ bụrụ na i mebeghị ya tupu oge eruo. Iji mee nke a, mepee nchekwa nchekwa nchekwa ahụ, pịa aka nri na họrọ ihe ahụ "Njirimara".
Cheta ụzọ nke nchekwa nne na nna, ọ bara uru mgbe ị na-adịghị arụ ọrụ.
Gaa na "Njedebe" ma gaa na folda nna na-ejicd / home / user / folderebe onye ọrụ - aha njirimara, na nchekwa - aha folda ebe nchekwa echekwara.
Iji malite usoro mmeghe, deewepu nchekwaebe nchekwa - aha nchekwa .zip ebe ọ dịghị mkpa ịgbakwunye, ọrụ ahụ ga-ekpebi usoro ya n'onwe ya.
Chere ka akara ntinye ọhụrụ ga-apụta. Ọ bụrụ na njehie apụtaghị, mgbe ahụ, ihe niile gara nke ọma ma ị ga-aga na folda ndị nne na nna nke archive ka ịchọta ụdị nke a na-emebeghị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye faịlụ ndị a na-enweghị ike na folda ọzọ, ị ga-etinye nkwenye ọzọ. Ugbu a, ị ga-edebanye ahaunzip folder.zip -d / ụzọebe / ụzọ - aha folda ebe a ga - azoputa faịlụ.
Chere maka nhazi nke ihe niile.
Ị nwere ike ịlele ọdịnaya nke iwu nchekwaunzip -l folder.zipdị na folda ndị nne na nna. Ị ga-ahụ ozugbo faịlụ niile.
Banyere arụmụka ndị ọzọ ejiri na Unzip utility, ebe a, anyị kwesịrị ịdeba ụfọdụ n'ime ihe kachasị mkpa:
-u- melite faịlụ dị na ndekọ ahụ;
-v- ngosi nke ozi niile dị maka ihe ahụ;
-P- ịmepụta okwuntughe maka inweta ikikere iji wepu ebe nchekwa ahụ (n'ihe banyere izo ya ezo);
-n- echekwala faịlụ ndị dị ugbu a ebe ị na-adịghị arụ ọrụ;
-j- ileghara usoro ihe nchekwa ahụ anya.
Dika ị nwere ike ịhụ, ọ dịghị ihe siri ike n'ịchịkwa ọrụ a na-akpọ Unzip, ma ọ gaghị adabara ndị ọrụ niile, ya mere anyị na-enye gị ndụmọdụ ka ị mara nke ọma na usoro nke abụọ, ebe a ga-etinye ihe ngwọta ọzọ.
Usoro 2: 7z
Ezubere usoro ịchọta ihe arụmọrụ 7z abụghị naanị maka imekọrịta na ụdị faịlụ nke otu aha ahụ, ma na-akwado ndị ọzọ na-ewu ewu, gụnyere ZIP. Maka sistemụ arụmọrụ na Linux, e nwekwara nsụgharị nke ngwá ọrụ a, yabụ anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ya.
Mepee njikwa ma budata usoro 7z nke ọhụrụ site na nchịkọta ụlọ ọrụ site na itinye iwu ahụsudo apt wụnye p7zip-zuru, na ndị nwe Uhie okpu na CentOS ga-ezipụtasudo yum wụnye p7zip.
Kwenye na mgbakwunye nke faịlụ ọhụrụ na usoro ahụ site na ịhọrọ nhọrọ dị mma.
Gaa na nchekwa ebe echekwara edebe ihe nchekwa ahụ, dịka e gosipụtara na usoro gara aga iji iwu ahụcd. N'ebe a, lee ọdịnaya nke ihe ahụ tupu ịkwakọ, ide ihe na njikwa7z l folder.zipebe folder.zip - aha ebe a choro.
A na-eme usoro ịkwanye n'ime nchekwa dị ugbu a7z x folder.zip.
Ọ bụrụ na faịlụ ọ bụla na otu aha ahụ dịlarịrị ebe ahụ, a ga-enye ha ka ha dochie anya ma ọ bụ wụnye ya. Họrọ nhọrọ dabere na mmasị nke aka gị.
Dị ka ọ dị banyere Unzip, e nwere ọtụtụ arụmụka ndị ọzọ na 7z, anyị na-adụ ọdụ ka ị makwaara onwe gị na ndị isi:
e- wepụ faịlụ na ụzọ (mgbe ijixụzọ na-anọgide na otu);
t- lelee ebe nchekwa maka iguzosi ike n'ezi ihe;
-p- Ezipụta paswọọdụ site na archive;
-x + ndepụta nke faịlụ- emechila ihe ndị ahụ akọwapụtara;
-y- azịza ziri ezi maka ajụjụ niile a jụrụ n'oge mwepu.
Ị natara ntụziaka maka otu esi eji ụlọ ọrụ ZIP abụọ na-ewu ewu. Lezienụ anya na arụmụka ndị ọzọ ma echefula itinye ha n'ọrụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.